प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि उद्योगमन्त्री हमालद्वारा राजीनामा - Himali Patrika
प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि उद्योगमन्त्री हमालद्वारा राजीनामा
हिमाली पत्रिका २४ असोज २०७८, 10:23 am
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । हमालले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राजीनामा बुझाउने बताए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि २२ असोजमा मन्त्री नियुक्त भएका हमालले तीन दिनमै राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘त्यत्तिकै विवादमा किन पर्ने ? म राजीनामा दिने पक्षमा गएँ । मैले राजीनामाको जानकारी दिइसकेको छु । आज गएर राजीनामा बुझाउँछु ।’प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा स्वीकृत गराउन बा​ध्य पार्न आफूले मिडियामा राजीनामा दिन लागेको जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कसलाई नभनी राजीनामा दिए शेरबहादुर देउवाले राजीनामा स्वीकृत गर्नुहुन्न । मैले पत्रपत्रिकामा भनेपछि उहाँलाई स्वीकृत गर्न बाध्यता हुन्छ ।’
तपाईले राजीनामा दिन लाग्नु भएको हो ?
हो, मैले आँफूलाई बिबादमा राख्न चाहेन, म माथि लागेका जुन खालका ब्लेमहरु छन्, आरोप र आलोचनाले म आँफूलाई बदनाम पार्न चाहेन, अनि मैले मेरो ब्यक्तिगत कारण राजीनामा दिने अन्तिम निर्णय लिएँ । अब खाना खाईसकेपछि मैले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिन्छु, यो मेरो अन्तिम निर्णय हो ।
तपाईलाई राजीनामाका लागि दबाब पनि भएको हो ?
हैन मलाई पार्टीले सहयोग गरेर नै म मन्त्री बनेको हो । मलाई पार्टी पंक्तीबाट कुनै पनि दबाब आएको हैन । मेरो राजीनामाको कारण मेरो ब्यक्तिगत कारण मात्रै हो, यसमा पार्टीको कुनै दोष छैन ।
तपाईमाथि लागेको कुन आरोपले तपाईलाई बदनाम महशुस गराएको हो ?
पहिलो कुरा त म राजनीतिमा लागेको मान्छे नै हैन भनेर जसरी आरोप लगाईयो, आलोचना गरियो , मलाई राजनीतिमा निकष्कृय मान्छेलाई मन्त्री बनाईयो भनेर आरोप लगाईयो । यो आरोपले मलाई मन्त्री पदमा बस्ने नैतिकता नदिएको महशुस भयो । अनि यो बाहेक अरु कुराहरु पनि छन् नि मेरो बारेमा आएका । तपाइँलाई पनि थाहै छ होला नि ।
तपाई कांग्रेस राजनीतिमा रहेको कुरा त साँचो हो नि ? हैनर ?
हो यसको मुल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् । मैले कांग्रेसका लागि गरेको योगदानका बारेमा । म बाँकेको पार्टी सभापति भएर पनि कार्यकाल पुरा गरेको मान्छे हुँ । तर त्यो बेला सुशील दाई ( सुशील कोइराला) ले जिल्ला समिति भंग गर्नु भयो ।
तपाईको राजीनामाले त तपाई माथि लागेका आरोप झन पुष्टि गर्ला त ?
हैन, यो कुरा जनताले बुझ्नु हुन्छ । मेरो कारण वर्तमान सरकारलाई लज्जित र आलोचित कसरी बनाउन सक्छु ? मैले पार्टीमा रहेर गरेको योगदान नेपाली जनताले बुझछन् । मैले जे गरे ठिक गरेको छु । यसले म माथि लागेको आरोपको पुष्ट्याईँ भन्दा पनि सरकार सञ्चालनका लाागि सहज बाटो बनाईदिएको भनेर म्यासेज जानु पर्छ ।